» नायिका स्वेता खड्कालाइ उनकी पति विजयन्द्रले साइकल सिकाउदै! भिडियो भयो भाइरल! हेर्नुहोस भिडियो… नायिका स्वेता खड्कालाइ उनकी पति विजयन्द्रले साइकल सिकाउदै! भिडियो भयो भाइरल! हेर्नुहोस भिडियो… – हाम्रो खबर
नायिका स्वेता खड्कालाइ उनकी पति विजयन्द्रले साइकल सिकाउदै! भिडियो भयो भाइरल! हेर्नुहोस भिडियो…
त्यस्तै पछिल्लो समयमा श्वेताको एउटा भिडियो सामाजिक संजाल मा भाइरल बनिरहेको छ । त्यो हो, श्वेताले आफ्ना पति बिजयेन्द्र संग साइकल सिकिरहेको । भिडियोमा श्वेता का पति बिजेन्द्रले श्वेतालाई खुव मजासंग साइकल सिकाइरहेको देख्न सकिन्छ । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ।